अन्तःशुल्क वृद्धिको असर : कुन मोटरसाइकलको मूल्य कति पुग्छ ? | गृहपृष्ठ
Home अन्तःशुल्क वृद्धिको असर : कुन मोटरसाइकलको मूल्य कति पुग्छ ?
काठमाडौं । नयाँ आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत सरकारले १ सय ५० सीसीभन्दा माथिका मोटरसाइकलमा अन्तःशुल्क बढाएको छ । यसअघि सबै मोटरसाइकलमा ४० प्रतिशत मात्रै अन्तःशुल्क लाग्थ्यो ।
बजेटमार्फत १ सय ५० सीसीदेखि २ सय ५० सीसीका मोटरसाइकलको अन्तःशुल्क ५० प्रतिशत पु¥याइएको छ । यस्तै, ५ सय सीसी नाघेको तर ८ सय सीसी ननाघेको रेसिप्रोकेटिङ इण्टरनल कम्बशन प्रिष्टोन इञ्जिन भएका मोटरसाइकलको अन्तःशुल्क बढाएर ८० प्रतिशत कायम गरिएको छ ।
८ सय सीसी नाघेको रेसिप्रोकेटिङ इण्टरनल कम्बशन पिष्टोन इञ्जिन भएका मोटरसाइकलमा अन्तःशुल्क १०० प्रतिशत पुर्‍याएको छ ।
मोटरसाइकलमा अन्तःशुल्कको नयाँ व्यवस्थाले होण्डाको साइन, सीडी ११० ड्रिमको मूल्य यथावत् हुनेछ भने होण्डाको सिबी हर्नेट १६० आर र सीबी युनिकर्न १६० को मूल्य बढ्नेछ । हिरोका स्प्लेण्डर प्रो, एचएफ डिलक्स, एचिभर १५०, सुपर स्प्लेण्डर, स्प्लेण्डर आईस्मार्ट ११०, स्प्लेण्डर प्लस, प्लेजर स्कूटर र ड्युट १ सय ५० सीसी भन्दा कमका मोटरसाइकल हुन् ।
मोटरसाइकलमा अन्तःशुल्कको नयाँ व्यवस्थाले हिरोका मोटरसाइकल विक्रेतालाई फाइदा हुने देखिएको छ । हिरोका करिज्मा र करिज्मा आर २ सय सीसीमाथिका मोटरसाइकल हुन् । यामाहाका एफजेड एफ १, एफजेड एसएफ १, स्यालुटो, एसजेड (आरआर भर्शन २.०), फ्यासिनो र रे जेडको मूल्य यथावत् रहनेछ ।
मोटरसाइकलमा सीसीअनुसार अन्तःशुल्क निर्धारणले सबैभन्दा बढी समस्या बजाजलाई पर्ने देखिन्छ । उक्त कम्पनीका पल्सर २२० एफ, आरएस २००, एएस २००, १८०, एनएस २००, एनएस १६० को मूल्य बढ्नेछ ।
पल्सर एएस १५० र पल्सर १५०, डिस्कभर १५० एफ र डिस्कर १ सय २५ सीसीको मूल्य यथावत् रहनेछ । एभेञ्जर २२० को मूल्य बढ्नेछ भने १ सय ५० को यथावत् रहनेछ । महिन्द्राका सेण्टुरो र प्याण्टुरोको मूल्य साविककै हुनेछ । टीभीएसको अपाचे १६० सीसीको मूल्य बढ्नेछ । टीभीएसको स्टारसिटी र बजाजको प्लाटिना मोटरसाइकलको मूल्य यथावत् रहनेछ । स्पोर्टी बाइक डुकाटीको मूल्य भने ६ लाख रुपैयाँसम्म बढ्ने भएको छ ।
सडकमा अनावश्यक र असंख्य मोटरसाईकलले बटुवालाई नै मार्ला जस्तो भइसक्यो । कार्वनडाइक्साडबाला धुंवा, धुलो, प्रेसर हर्नयुक्त आवाजले हजारौ लाखो मान्छे बिरामी हुंदैछन् । सांघुरो गल्ली, चेप्टो ठाउं, सडकपेटीमा अराजक, उंछृखंल भएर गुडाईने मोटरसाईकलले मोटरसाईकलसंग सम्बन्ध नभएका मान्छेको जीउज्यानलाई खतरामा, पारेको छ । जोखिम बढाएको छ । एक जना मान्छेले मोटरसाईकल सुविधा प्रयोग गर्दा त्यसको जोखिम र घातक असर आम मानिसलाई पर्छ । परिरहेको छ । बढ्दो छ । त्यसैले १०० सिसि भन्दा बढी सिसिको मोटरसाइकल र नानोस्तर भन्दा माथिको निजि, प्राइभेट कम्पनी र सरकारी सवारी साधनहरुमा समेत चुरोट, खैनी, मदिरा, लागुपदार्थ जतिकै कर, अन्तशुल्क, मासिक स्वास्थ्य र प्रदुषण नियन्त्रण कर, मानिसको जिउज्यान जोखिम कर, शुल्क लगाउनु जरुरी छ । सडक कर वेग्लै लगाउनु जरुरी छ । ठूलो आवाज निकाल्ने, ढटढट आवाज निकाल्ने, स्टाइल पारेर गडाइने मोटरसाईकल गुडाइने मोटरसाईकलमा थप अतिरिक्त कर लगाउनु जरुरी छ । अहिलेको कर त एकदम न्यून छ । सरकारले माथि उल्लेख गरिए झैं कर लगाउनु जरुरी छ । बजारमा महंगी तेलको भाउ बृद्धिले भैरहेको छ । अनावश्यक गुडाईने सवारीसाधनहरुका कारण बजारमा बढदै गएको महंगीको असरले आम मानिसलाई अक्रान्त पार्दै लगेको छ । त्यसलै मासिक रुपमा सतप्रतिशत तथा अतिरिक्त करको माध्यबाट मोटरसाईकल लगायत अनावश्यक सवारीसाधन वृद्धिलाई निन्त्रण गर्नुपर्छ ।
LeaveaReply to vola mahato Cancel Reply